Xiaomi's Yeelight ayaa hadda la jaan qaadaya Apple's HomeKit | Wararka IPhone
Mid ka mid ah fursadaha ay bixiyaan qalabka gacanta sida iphone ama ipad waa suurtagalnimada gurigeenna ka dhig guri isku xiran. Fikrad ah in dhowr sano ka hor, bilawgii qalabaynta guriga, ay ahayd mid aan la malayn karin, laakiin taasi hadda waxay ku sii kordheysaa gacanta iyada oo loo mahadcelinayo nidaamyada sida Apple's HomeKit iyo alaabada sii raqiisan.
Qof walba ayaa raba ka faa'iideyso wanaagga otomaatiga guriga, dalab baa jira ... Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno Xiaomi, Sumadda Shiinaha ee wax walba qabata, oo sidoo kale samaysa aalado casri ah. Kuwa ay nalalka casriga ah, 'Yeelight', ayaa ka mid ah xulashooyinka ugu raqiisan Si la mid ah nalalka qiimaha sareeya, haa, iyagu ma ahayn kuwo la jaan qaadi kara Apple's HomeKit sidaa darteed waxay ahayd lagama maarmaan in la isticmaalo barnaamijka shirkadda. Laakiin sugitaanku wuu dhammaaday ... Nalalka casriga ah Yeelight horay ayey ula jaanqaadi jirtay Apple's HomeKit ...
Hagaag haa, sugitaanku wuu dhammaaday. Waana qaar badan oo dalbaday taageerada HomeKit ee Sannadka. Hadda waxaa suurtagal ah in la cusbooneysiiyo nalalka nooca ugu dambeeya. Kaliya ku samee barnaamijka Yeelight Waan ka boodeynaa ogeysiiska si loogu daro barnaamijka Guriga. Waa muhiim in aan ku darno barnaamijka ee sumadda maxaa yeelay xilligan ku jira baakadaha nalalka ha ku darin lambarka QR laga bilaabo HomeKit tanina waxay noqonaysaa sida keliya ee loogu daro nidaamka otomaatiga guriga ee Apple. Waxyaabaha sanadlaha ah ee ku daraya taageerada AppleK HomeKit waa sida soo socota:
Yeelight Smart LED Guluubka v2 (Midab)
Caagga Cagaaran ee Smart Smart-ka ah (Qiyaasta cad)
Nalalka iftiinka Yeelight Aurora Lightstrip Plus
Ujeeddada 'Yeelight' waxay ujeedadeedu tahay inay u keento kuwa ugu fiican adduunka ee khibrada nalalka casriga ah Sideedii bilood ee la soo dhaafay, injineeradeenu si adag ayey u shaqeeyeen si ay u keenaan iswaafajinta HomeKit ilaa seddex ka mid ah alaabteenii dhaxalka ahayd.
Kaliya ku cusbooneysii qalabka barnaamijka ugu dambeeyay oo raac tilmaamahayaga si aad ugu darto qalabkaaga Yeelight HomeKit. Hadda ku raaxee raaxada HomeKit oo leh Siri on your iPhone iyo iPad!
Dabcan, sida aad arki karto, nambarkii ugu horreeyay ee Yeelight Smart LED Bulb laguma darin on nalalka ku daraya qafiskan HomeKit. Ceeb tan iyo markii ay ahaayeen guluubyo aad loo jecel yahay qiimahooda oo hooseeya awgood, qaar badanna ma iibsan nooca soo socda si loo cusbooneysiiyo. Waan arki doonaa haddii ay maareeyaan inay ku daraan badeecooyin dheeraad ah liistada HomeKit maaddaama iswaafajintan ay tahay war weyn oo dhinac walba ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Xiaomi's Yeelights waxay hadda la jaan qaadayaan Apple's HomeKit